सम्पादकीय- Page4of 102 - Online Majdoor
उपभोक्ता समितिप्रति मन्त्री झाँक्रीको वक्रदृष्टि
‘कच्चा वैद्यको मात्रा, यमपुरीको यात्रा’ व्यवहारसिद्ध उखान हो । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिबाट हुने खरिद प्रक्रिया अवैध मान्नु त्यस्तै निर्णय हो । यो निर्णयले जनताकै नेतृत्व...
जनगणनामा सहयोग गरौँ
देशभर बिहीबारबाट राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम सुरु भएको छ । जनगणना कार्यक्रमअन्तर्गत घरदैलोमा आउने गणकहरूलाई सत्यतथ्य जानकारी भराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो । गणकहरूले पनि नागरिकले दिएको जानकारी सोहीअनुसार बिनापूर्वाग्रह...
राज्यका धेरै जिम्मेवारीमध्ये एउटा प्रमुख जिम्मेवारी देशको सीमा रक्षा गर्नु हो । त्यसकारण, ठूलो खर्च गरेर सीमा रक्षा गर्न भौतिक पूर्वाधार बनाउनेदेखि सीमा रक्षकको पनि व्यवस्था गरेको हुन्छ । आफ्नो सीमाभित्र...
‘जीवित–सङ्ग्रहालय’ को नयाँ पुस्ता कस्तो होला ?!
२२ कार्तिकको दिन ‘कान्तिपुर’ दैनिकले ‘भक्तपुरको आफ्नोपन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्यो । उपत्यकाका सहरबस्ती र बाहिरी जिल्लामा समेत भक्तपुरबारे कुराकानी र छलफल भइरहेको पाइन्छ । निल्स गुत्सो भक्तपुरको वास्तुकला, संस्कृति तथा सम्पदाको...
सोमबारबाट सुरु भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विस्तारित बैठकलाई चीनका जनताले विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले पनि यो विस्तारित बैठकको महत्वबारे विशेष प्राथमिकताका साथ प्रचार गरेका छन् । संसारकै सबभन्दा...
नवलपरासीमा एसएसबीको अर्को ज्यादती
भारतसँग जोडिएको नेपालका सीमामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को हस्तक्षेप नयाँ घटना कदापि होइन । दार्चुला जिल्लामा महाकाली नदीमाथि राखिएको तुइन एसएसबी फोर्सले तार काट्दा नदीमा खसेर बेपत्ता भएका...
भारतमा विद्युत निर्यात र एमसीसी पारित गर्न ललिपप
शुक्रबार मध्यपुर थिमिको बोडेमा सम्पन्न विविध भाषा साहित्य सम्मेलनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले ‘भारतीय शासक वर्गले अमेरिकीहरूलाई अघि सारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको’ बताउनुभएको थियो ।...
एमसीसीबारे किन लुकाइँदै छ सूचना ?
स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु सम्मेलनबाट फर्केका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा एमसीसी सम्झौता पारित हुनेबारे आफू र प्रचण्डले एमसीसी कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको खुलासा गरे ।...